A naghị elekwasị ihu ụlọ ahụ anya n'akụkụ m ma ọ bụ na-elekwasị anya na-eme ka ọ dị mma maka mgbasa ozi mmekọrịta ma ọlị. Ibe Digg m kwesiri inwe ntughari nke enyi m, diggs m n'oge na-adịbeghị anya, yana mpaghara ọdịnaya ndị ọzọ m nwere ike itinye (site na otu, wdg)
Nkwupụta Pro / Con. Ọ ga-amasị m ịhụ onye nwere ezigbo okwu maka isiokwu, yana onye nwere isiokwu kachasị mma MEGIDE. Ka anyi bido n’agha ahu. Okwu iyi na-enweghị njedebe enweghị isi.